नेटफ्लिक्स विद्यार्थी छुट - २०२० मा आधिकारिक रूपमा उपलब्ध छ? - मनोरञ्जन
नेटफ्लिक्स विद्यार्थी छूट भाँचिएका विद्यार्थीहरूको वर्तमान पुस्ताको लागि आवश्यक छ। नेटफ्लिक्स ईन्टरनेटमा सब भन्दा ठूलो स्ट्रिमिंग प्लेटफर्म हो। कलेज कहिलेकाँहि तनावपूर्ण हुन सक्छ। विद्यार्थीको रूपमा तपाईलाई ब्रेक लिन केहि चीज चाहिन्छ। नेटफ्लिक्स भनेको इन्टरनेटमा लाखौंले रोजेको विकल्प हो। तिनीहरूसँग धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन्। इन्टरनेट मा, तपाईं चाँडै तिनीहरूको साइट संग धेरै मनोरन्जन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाइँको मनपर्ने शो र चलचित्र अनलाइन को घर हो। कडा बजेटमा भएका प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रीमियम सदस्यता काफी महँगो हुन सक्छ। विद्यार्थीहरू सामान्यतया रासन चीजहरूको लागि प्रयास गरेर पैसा बचत गरिरहेका हुन्छन्।
के नेटफ्लिक्ससँग विद्यार्थी छूट छ?
धेरै व्यक्तिहरू अनजान छन् यदि नेटफ्लिक्सले पनि पहिलो स्थानमा एक छात्र छुट प्रदान गर्दछ। उत्तर एकदम सरल छ। शानदार मनोरन्जन प्लेटफर्मसँग विद्यार्थीहरूको लागि अझै एक विकल्प छैन। कलेज कलेजका बच्चाहरू अवसर पाउन मन पराउँछन्, तर मनोरन्जन विशालले केहि पनि जारी गरेको छैन। उनीहरूसँग सामग्रीको विशाल पुस्तकालय छ जुन धेरै भाँचिएका कलेज बच्चाहरूले महँगो सदस्यताहरूको कारण मिस गर्नेछन्। एक छात्र छुट तपाईं आफ्नो वित्त जोगाउन मदत गर्दछ। सबै ठूला ब्रान्ड जसले मनोरन्जन सेवाहरू प्रस्ताव गर्छन् विद्यार्थी योजनामा ​​लगानी गर्छन्। नेटफ्लिक्स केवल केही साइटहरू मध्ये एक हो जसमा विद्यार्थीहरूको लागि कुनै थप प्रावधान छैन। विद्यार्थीहरूको लागि क्युरेटेड कुनै योजना छैन जुन तपाईंमा खर्चको बोझ कम गर्दछ।
नेटफ्लिक्स निःशुल्क परीक्षण - प्राप्त गर्नका लागि चरणहरू
नेटफ्लिक्सको नि: शुल्क परीक्षणहरू मनोरन्जनको लागि बाँच्नको उत्तम तरिका हो। साइटले प्रयोगकर्ताहरूलाई नयाँ खाताहरू सिर्जना गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ। अनलाईन असीमित नि: शुल्क परीक्षण खाताहरू बनाउन अनलाईन उपलब्ध छन्। प्रयोगकर्ताहरूले साइन अप गरेर, फेरि र फेरि, बिभिन्न संस्करणहरू प्रयोग गरेर काम पाउन सक्दछन्। यो एक व्यावहारिक विकल्प हो तर अन्तमा काम गर्न रोक्दछ। नेटफ्लिक्स एक लोकप्रिय साइट हो, र तिनीहरू जहिले पनि यस्ता उल्लंघनहरू पत्ता लगाउन नयाँ उपकरणहरू विकास गर्दैछन्। धेरै व्यक्तिले अद्वितीय ईमेल आईडीको साथ साइन अप गर्न भर्चुअल क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्छन्। यो केहि सजिलो तरीका हो नि: शुल्क गुणस्तरीय मनोरन्जन प्राप्त गर्नका लागि। यहाँ नेटफ्लिक्स निःशुल्क परीक्षण सक्रिय गर्नका लागि चरणहरू छन्।
तपाईंको कम्प्युटरमा ब्राउजर सुरू गर्नुहोस् र आधिकारिक साइट हेर्नुहोस्। प्रयोगकर्ताहरूले यो प्लेटफर्मबाट नयाँ खाताको लागि साइन अप गर्न आवश्यक छ। यसले तपाइँलाई आउँदो days० दिनको लागि नेटफ्लिक्स नि: शुल्क लिन मद्दत गर्दछ। तलको भ्रमण गर्नुहोस् लिंक
यो प्रयास गर्नुहोस् अब विकल्पहरू साइटमा तपाईंको नि: शुल्क परीक्षण सुरू गर्न क्लिक गर्नुहोस्। प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको ईमेल आईडी र पासवर्डको साथ प्लेटफर्मको साथ नयाँ खाता सिर्जना गर्न सक्दछन्। यो साइट मा सदस्यता पृष्ठ तपाईं ले हुनेछ।
प्रयोगकर्ताहरूले एक योजना खोज्नु पर्छ जुन उनीहरूको अवलोकन गर्ने बानीका लागि उपयुक्त छ। यो नि: शुल्क परीक्षणको लागि उत्तम प्रयोग गर्नु फाइदाजनक हो। यदि तपाईं आफ्नो सेवाहरू जारी राख्नुहुन्छ भने तपाईं सधैं परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
नयाँ प्रयोगकर्ताहरूले खातामा तिनीहरूका पत्यारपत्रहरू प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। सुरक्षा सेवा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको लागि शीर्ष प्राथमिकता हो। तपाईंले सुरक्षित पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ। धेरै मानिसहरूले यस दिन नेटफ्लिक्स खाताहरू क्र्याक गर्न सक्दछन्।
विद्यार्थी छूट सक्षम गर्न, तपाईंले कामको भुक्तानी विवरणहरू प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। नेटफ्लिक्सले पेपैल र क्रेडिट कार्डहरू मार्फत भुक्तानी स्वीकार गर्दछ। यी दुबै साइटमा सदस्यता लिने व्यावहारिक रूपहरू हुन्।
एकचोटि कन्फर्मेसनहरु आयो भने तपाई आफ्नो खाता संग नि: शुल्क नेटफ्लिक्स प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि प्लेटफर्ममा उच्च-गुणवत्ता सामग्री स्ट्रिम गर्न लग इन गर्नुहोस्। साइट तपाइँको योजना को आधार मा HD को UHD गुणवत्ता समर्थन गर्दछ। Card० दिन भित्र परियोजना रद्द गर्नुहोस् तपाईंको कार्डको साथ सदस्यता भुक्तान गर्नबाट जोगिन। विश्वका केही क्षेत्रहरूमा नेटफ्लिक्सले नि: शुल्क परीक्षणको सट्टा पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ।
असीमित नि: शुल्क परीक्षण कसरी प्राप्त गर्ने?
असीमित नि: शुल्क परीक्षण प्राप्त गर्न, प्रयोगकर्ताहरूसँग उनीहरूको आस्तीनहरूमा केही ट्रिकहरू हुन आवश्यक छ। यी उपकरणहरूले सबै भन्दा राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ जब तपाईं साईन अप प्रणाली कोन योजना गर्दै हुनुहुन्छ। नि: शुल्क नेटफ्लिक्सको आनन्द लिन प्रत्येक महिना नयाँ खाताहरू बनाउनुहोस्।
भर्चुअल क्रेडिट कार्डहरू:
धेरै अनलाइन साइटहरूले तपाईंलाई भर्चुअल क्रेडिट कार्डहरू प्रदान गर्दछ। नि: शुल्क परीक्षणहरूको लागि साइन अप गर्न तपाईंसँग यिनीहरूको पर्याप्त आपूर्ति हुन आवश्यक छ। सब भन्दा सजिलो तरिका मध्ये एक तपाईं एक बनाउन सक्नुहुन्छगोपनीयता.com। तिनीहरूको सेवाहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई अवस्थित कार्ड प्रयोग गरेर नयाँ भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यो १००% वैध हो र सबै प्रमुख प्लेटफर्महरूमा काम गर्दछ। गोपनीयता यसको सुरक्षित अनलाइन भुक्तान सेवाहरु को लागी दुनिया भर मा मान्यता प्राप्त छ। खर्च सीमाका साथ नयाँ सुरक्षित भर्चुअल कार्डहरू सिर्जना गर्नुहोस् ताकि तपाईं अनलाइन शपिंग गर्दा सुरक्षित रहन सक्नुहुनेछ।
भर्चुअल निजी नेटवर्क तपाईंको स्थान मास्क गर्न मद्दत गर्दछ। यो नेटफ्लिक्स साइटमा बिing्ग धेरै समय खर्च गर्ने मानिसका लागि महत्वपूर्ण छ। एक VPN साइट मा एक नया खाता बनाउने बेला तपाईको स्थान खराब गर्न मद्दत गर्दछ। नेटफ्लिक्स जियोटर्गेटि uses्ग प्रयोग गर्दछ व्यक्ति नि: शुल्क परीक्षण कार्यक्रम दुरुपयोग गरिरहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नका लागि। त्यहाँ VPN अनलाइन को लागी केहि भुक्तान गरीएको र धेरै निःशुल्क विकल्पहरू छन्। हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईको साईन अप आवश्यकताहरूको लागि NordVPN प्लेटफर्म प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। यो तपाईको स्थान अनलाइन परिवर्तन गर्नका लागि उत्कृष्ट सेवा हो।
भ्रमण गर्नुहोस् - https://nordvpn.com/ ।
नेटफ्लिक्सका लागि उत्तम विकल्पहरू के के हुन्?
नेटफ्लिक्समा केहि विकल्पहरू छन् जुन तपाईंको अनलाइन प्रयोगको लागि लाभदायक हुन सक्छ। अमेजन, हुलु, र अन्य जस्ता लोकप्रिय ब्रान्डहरूले एक विद्यार्थी छुटमा लगानी गरेका छन्। हामी तिनीहरूलाई हेर्ने छौं र तपाईंलाई तपाईंको मनोरन्जनमा मद्दत गर्दछौं। विकल्प महान हो तर नेटफ्लिक्स जत्तिकै होईन। धेरै मानिसहरूले प्लेटफर्मलाई मनपराउँदछन् किन कि यो सुविधा प्रदान गर्दछ। इन्टरनेटमा अरूहरू विरलै आफ्नो मनोरन्जन पुस्तकालय र पहुँचको सजिलोको हिसाबले कुनै पनि नजिक आउँदछन्। एक विद्यार्थीको रूपमा, तपाईंसँग सस्तो सेवाहरू खोज्नु बाहेक अरू विकल्प छैन।
Hulu Spotify र शोटाईमको साथ साझेदारी गरी छ कि विद्यार्थीहरूलाई एक सस्तो स्ट्रीमिंग सेवा प्रस्ताव गर्न। तपाइँ तपाइँको मनपर्ने शो Hulu संग $ 4.99 को लागी हेर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूको सेवा को उपयोग गर्न को लागी धेरै फाइदाहरु छन्। समग्रमा, Hulu प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्कृष्ट प्लेटफर्म हो जुन पुरानो स्कूल र नयाँ मनोरन्जनको मिक्स मनपर्दछ। त्यहाँ धेरै लोकप्रिय शोहरू जस्तै ब्रूकलिन नाइन-नाइन, बॉबको बर्गरहरू, अन्यहरू हुन्। सजीलै तपाइँका सबै उपकरणहरूमा तपाइँको मनपर्ने शो स्ट्रिम गर्न शुरू गर्नुहोस्।
भ्रमण गर्नुहोस् - https://www.hulu.com/ ।
२. अमेजन प्राइम भिडियो
प्राइम भिडियो एक विशेष अमेजन सेवा हो। तिनीहरू सबै समावेशी प्रदान गर्दछ विद्यार्थी छुट कलेज जाने बच्चाहरूलाई। यसले तपाईंलाई सबै प्रीमियम स्ट्रिमि free सेवाहरू नि: शुल्क उपभोग गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंको उपकरणहरूमा भर्खरको शो र चलचित्रहरू प्राप्त गर्नका लागि रमाईलो गर्नुहोस्। अमेजन प्राइम भिडियोसँग विभिन्न दर्शकहरूको लागि धेरै सामग्रीहरू छन्। यो बजेटमा व्यक्तिहरूको लागि नेटफ्लिक्सको उत्कृष्ट विकल्प हो। उनीहरूको सबैभन्दा लोकप्रिय शो टम क्लेन्सीको, ज्याक र्यान हो। हाल, तिनीहरू विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको प्रीमियम सेवाहरूको लागि छ महिनाको परीक्षण प्रदान गर्दैछन्।
भ्रमण गर्नुहोस् - https://www.primevideo.com/ ।
नेटफ्लिक्स विद्यार्थी छुट विश्वभरका मानिसहरूका लागि अवस्थित छैन। तपाईं आफ्नो मनपर्ने सामग्री कुनै पनि उपकरणमा स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आशा गर्दछौं कि यसले छुटको सम्बन्धमा आवश्यक विवरणहरूको सहयोग पुर्‍याउँछ।
कसरी एम? एलाई एमपी? मा रूपान्तरण गर्ने?
पीसीको लागि किक मेसेन्जर कसरी डाउनलोड गर्ने?
के ओभरवाच क्रस प्लेटफर्म छ? पछिल्लो अपडेट (२०२०)
रोबलोक्स FPS अनलकहरू - के यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिईन्छ?
१ool कूल रमाईलो वेबसाइटहरू कुनै पनि समयमा रमाइलो गर्न
RTX 2080 vs GTX 1080 - गेमि forका लागि कुन चाहिँ उत्तम छ?
कतिजनाले एकै पटक डिज्नी + लाई हेर्न सक्दछन्?
ExpressVPN निःशुल्क परीक्षण २०२० - Day० दिनसम्म पैसा फिर्ता (प्रमाणित)
रोब्लक्स त्रुटि कोड २77 फिक्स गर्नुहोस् - सम्भावित समाधानहरू
Tumblr मा कसरी सुरक्षित मोड बन्द गर्ने?
नेटफ्लिक्सका लागि Best सर्वश्रेष्ठ VPN - डिसेम्बर २०२०
सर्वश्रेष्ठ एन्ड्रोइड टिभी बक्स २०२० - पढ्नु पर्छ (समीक्षा)
एमपी ube को लागि यूट्यूब। org
$ १० PSN कार्ड कोड नि: शुल्क
त्यहाँ एक तरीका छ नि: शुल्क xbox प्रत्यक्ष प्राप्त गर्न
जुन वास्तविक किस्मानाइम हो
टेक्स्टशिट सबै अहिलेको लागि गयो
पुरानो शहर रोड रोबक्स आईडी
डाउनलोड गर्नुहोस् कति उच्च फिल्म नि: शुल्कका लागि